काउटिन्होलाई बेचेर नेयमार फर्काउने बार्सिलोनाको तयारी ! – Medianp
काउटिन्होलाई बेचेर नेयमार फर्काउने बार्सिलोनाको तयारी !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुष २७, २०७५२०:२६0
काठमाडौंः जनवरी ट्रान्सफर विन्डो खुलिसकेको छ । विन्डो खुलेपछि केही रोचक चर्चा समेत सुरु भएका छन्। स्पेनिस पत्रिका इल मुन्डोले ब्राजिलका कप्तान स्टार नेमारले आफु बार्सिलोना फर्किने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरेको छ।
सन् २०१७ मा चार वर्षको बसाइपछि बार्सिलोना छाडेर २ सय २२ मिलियन यूरोमा विश्वकै सर्वाधिक महंगो खेलाडी भएर नेमार फ्रान्सेली क्लब पिएसजी पुगेका छन्। उनी पिएसजीमा खुशी नभएको मुन्डोले जनाएको छ। बार्सिलोनामा पुन फर्काउने प्रयासमा नेमारका पिता लागि परेको जनाइएको छ।
यसैबीच वेलायती पत्रिका इभिनिङ स्टान्डर्डले बार्सिलोनाले नेमार क्लबमा फर्काउन चाहेको जनाएको छ। अर्का ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिप कोटिन्हो बेचेर बार्साले नेमार भित्राउने प्रयास सुरु गरेको स्टान्डर्डको दाबी रहेको छ।
विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो, उज्जव थापाको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता
झापाका दक्षिणी भेगका ३ गाँउपालिका मिलेर वीथ्री (हामी तीन) टीम गठन गर्ने निर्णय
२०२२ मा हुने विश्वकपको लागी ४८ देश सहभागी हुँदै ! अन्य ५ देशमा पनि खेल हुने
रियल आएपछि जिदानले भने, ‘नेयमार दुनियाँका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी मध्ये एक हुन्’